Isitolo esidayisa yonke impahla wholesale ulamula ukunambitheka kwe-disinfection ukunakekelwa komuntu siqu ama-antibacterial wet wipes Supplier and Manufacturer | Kungcono
Factory wholesale ulamula ukunambitheka kwe-disinfection ukunakekelwa komuntu siqu ama-antibacterial wet wipes
Ama-wibacterial wipes angabulala ngempumelelo ama-99.9% amabhaktheriya futhi avikele ukuphepha nempilo yempilo. Ukuhlanza izandla okusheshayo nokushesha. Mahhala amakhemikhali anokhahlo.
Igama lomkhiqizo: ama-antibacterial cleansing wipes
Inombolo imodeli: QMSJ-327
Izinto: Indwangu yekhwalithi ephezulu ye-spunlace engalukwanga
Izithako ezisebenzayo: I-Benzalkonium chloride, i-Nov-woven, i-Ro-water
Izithako ezingasebenzi: I-Aqua, i-Ethanol, i-Propylene Glycol, i-Tocopheryl Acetate, i-Polysorbate 20, i-Phenoxyethanol, i-Parfum.
Izingcezu ngekani ngalinye: Izibalo ezingama-200
Njengoba abantu emhlabeni jikelele beya ngokuya bazi ngempilo enempilo kanye nempilo yenhlanzeko, i-BEETER DAILY PRODUCTS CO., LTD iqhubekile nokuqalisa ukusula utshwala kanye nokubulala amagciwane kanye nama-antibacterial wipes, ngethemba lokusiza abantu abaningi ngokwengeziwe ukuthi banikeze impilo ephephile, enempilo futhi elula. Ngakho-ke, sizimisele ukunikeza izaphulelo ezinhle kakhulu ngangokunokwenzeka ngenkathi silawula izindleko. Siyethemba ukuthi abantu abaningi bazobona imikhiqizo yethu.
Ama-antibacterial wipes angasetshenziselwa ukuhlanza nokubulala amagciwane ezandleni nasemzimbeni, futhi futhi ingabulala amagciwane futhi ihlanze indawo yezinto. Isixazululo somuthi sokwesula okuqukethe ama-antibacterial siqukethe kancane futhi sinomonakalo omncane esikhunjeni. Kepha uma uthola ukungezwani komzimba noma ukungaphatheki kahle kwesikhumba lapho usisebenzisa, sicela uyeke ukukusebenzisa bese ufuna izeluleko kudokotela.
Njengefektri esula amanzi, kuyinkolelo yethu ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo engcono kakhulu nensizakalo ehamba phambili. Siyajabula kakhulu ukwenza ngezifiso imikhiqizo ehlukile kumkhiqizo wakho. Sinefomula ephelele. Uma unezidingo ezikhethekile zokunambitheka kokusula okumanzi, singakwazi futhi ukulungisa ifomula ngokuya ngezidingo zakho.Siphinde sibe neqembu lokuklama elinganikeza usizo ekwakhiweni kokupakisha. Ungashintsha ukupakisha kwesikhwama noma ukupakisha ikani.
Lezi zicubu ezimanzi ezilwa namagciwane ziyafana nohlobo lokusula esikukhiqizayo esikhathini esidlule. Ubukhulu bokusula banele ukusetshenziswa nsuku zonke. Kukhona ama-wipe angu-200 emanzi ngetoti ngalinye, anele ukuthi umndeni uwasebenzise isikhathi esithile ngaphakathi kwesikhathi sokusebenza. Sincoma nokuthi ukwelashwa kusetshenziswe emakhaya, kodwa futhi nasemahhovisi nakwezinye izindawo.
Okokuhlanza izandla ukunciphisa amabhaktheriya esikhunjeni.
Inconyelwe ukusetshenziswa okuphindiwe.
Musa ukusunduza iminwe ngokuvula.
Gcina iziqukathi zivalwe ngci endaweni eyomile, epholile futhi enomoya omuhle. Kunconywe ukushisa kwesitoreji: O'C kuye ku-40C.
Langaphambilini Yamukela ama-wipe wokuhlanza isikhumba esenziwe ngokwezifiso e-Car
Olandelayo: Ikhishi lokuhlanza uwoyela onamathebula esitofu itafula lokuhlanza amakhishi okusula
ama-antibacterial cleansing wipes
Izicubu ezimanzi ezilwa namagciwane
ukusula kwama-antibacterial okunobungane
Izesuli Ezinkulu Zokulwa Namagciwane
ama-organic antibacterial wipes
ukunakekelwa komuntu siqu ama-wipe wet wet
Encane futhi ephathekayo ukusetshenziswa kwansuku zonke ukubulala amagciwane kanye ...